Yahuuda oo aad usii kordhisay iney caruurtooda ku tarbiyeeyaan dagaalka iyo farsameynta hubka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Yahuuda oo aad usii kordhisay iney caruurtooda ku tarbiyeeyaan dagaalka iyo farsameynta hubka.
On Jan 17, 2022 211 0
Wargeys ay leeyihiin Yahuuda oo lagu magacaabo “Haaretz” ayaa shaaca ka qaaday adeegsiga iyo qorista ardayda Yahuuda iney aad u korortay taasoo looga dan leeyahay si loo soo saaro loona horumariyo hubka tignoolajiyada militariga.
Warbixinta ayaa shaacisay in “Wasaaradda Amniga” ay dhawaan bilowday, iyada oo la kaashanaysa Wasaaradda Waxbarashada, barnaamij cusub oo loogu talagalay ardayda oo ku aadan dhanka milatariga. Mossad oo ah garabka sirdoon ee Yahuuda ayaa sheegay in “Israa’iil ay u baahan tahay askar wanaagsan iyo sareynta tignoolajiyada, waana midda keeneysa iney ardaydooda xoogga saaraan.
Wargeysku waxa uu ku sheegay maqaal uu qoray in ololahan lagu doonayo in lagu askareeyo carruurta da’doodu u dhaxayso 14 ilaa 15 sano, waxaa la barayaa daraasaadka dhinacyada injineernimada iyo adeegga milatariga ee qaybaha tignoolajiyada ee Mossad.
“caruurta lagu daray cutubyada waxay yeelan doonaan saameyn weyn,” ayuu yiri Ayers. “Dadka da”da yar waxay sameeyaan wax weyn, marka waxaa muhiim noo ah inaan sare u qaadno arrintaas. Maanta ma awoodno inaan dhaqaaq sameyno injineer la”aantiis, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Wargeysku waxa uu xusay in qorshuhu uu soconayo in ka badan 12 sano, waxaana ka mid ah waxbarashada heerka sare iyo in uu shahaadada injineernimada korontada ka qaato Technion, iyo adeeg ciidan oo socon doona muddo lix sano ah, isaga oo xusay. koorsada kowaad waxay bilaabatay todobaadkii hore ilaa 40 arday ayaana loo qaatay.
Yahuuda ayaa waxaa aad ugu yar dhalmada, haweeneyda Yahuuda ayaa celcelis ahaan dhasha 3 illaa 6 caruur ah, halka hooyada falastiiniga ah ay dhasho in ka badan 10 caruur ah waana midda keeneysa in Yahuudu ay inta badan caruurtooda baraan xirfadda ciidanka.
Laakin iyadoo ay sidaasi tahay waxay Yahuuda iyo reer galbeedka dowladaha kale ku cadaadiyaan ineysan culuumta caskariga bari karin arday ka yar 18 sano, halka ay iyagu caruurtooda ku ababainayaan hubka sida loo rido iyo sida loo sameeyo.